လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: August 2016
(ကျား) - "Happy Birthday!!! ဆွီတီ..."
(မ) - "ကျေးဇူးကမ္ဘာနော် ဘေဘီ... ဒါနဲ့ မွေးနေ့အတွက် ဘာလက်ဆောင် ယူလာပေးလဲ... ?"
(ကျား) - (လက်ညိုးညွှန်ပြီး) "ဟိုးးးမှာ ရပ်ထားတဲ့ BMW ကား အနီရောင်လေး တွေ့တယ် မဟုတ်လား?"
(မ) - "အိုးမိုင်ဂေါ့!!! တွေ့တယ်... တွေ့တယ်... မယုံနိုင်စရာပဲ... I love you so much, baby..."
(ကျား) - "အေး... ဟုတ်ပီ... အဲဒီကားနဲ့ အရောင်တူတဲ့ သွားတိုက်တံ တစ်ချောင်း ယူလာပေးတယ်..."
(မ) - "မိုးကြိုးပစ် :-( :-( :-( :'( :'( :'( !!!!"
:-P :-P :-P :-D :-D :-D :-P :-P :-P :-D :-D :-D
အခြားမြို့တစ်မြို့မှာ သွားရောက် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူ့မွေးရပ်မြေမှာရှိတဲ့ ဇနီးသည်ကို စာလှမ်းရေးတယ်....
"ယခုတလော ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အကြပ်အတည်းက ကိုယ်တို့ကုမ္ပဏီကိုပါ လာပြီး ဂယက်ရိုက်နေလို့ ဒီလအတွက် လစာမပို့ပေးနိုင်ဘူးကွာ... အဲဒီအစား 'အာဘွား' အခါ ၁၀၀ ပို့ပေးလိုက်တယ်ကွာ..."
"မင်းဟာ ကိုယ်ရဲ့အချစ်ဆုံးပါ... ဒီလတော့ အဆင်ပြေသလို ကြည့်ပြီး နေလိုက်ပါအုံး... ကိုယ့်ကို နားလည်ပေးပါ..."
ဒီအခါက ဇနီးဖြစ်သူက အောက်ပါအတိုင်း စာပြန်ရေးလိုက်တယ်...
"'အာဘွား' အခါတစ်ရာ ပို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...."
"အောက်က စာရင်းကတော့ ဒီလအတွက် 'အာဘွား' နဲ့ ပေးချေခဲ့ရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေပါ..."
"၁။ နွားနို့ ၁ လစာအတွက် နို့ကုလားကို 'အာဘွား' ၂ ခါ..."
"၂။ လျှပ်စစ်မီတာ လာကောက်တဲ့ လူကြီးက မီတာခမပေးရင် မီးဖြတ်မယ်ပြောလို့ "အာဘွား" ၇ ခါ..."
"၃။ ကျမတို့ ငှားနေတဲ့အိမ် လခအတွက် အိမ်ပိုင်ရှင်ကို နေ့စဉ် "အာဘွား" ၂ ခါကနေ ၃ ခါ..."
"၄။ စူပါမားကတ် ပိုင်ရှင်ကတော့ ကျမပေးတဲ့ 'အာဘွား' ကို လက်မခံဘူး... ဒါနဲ့ ကျမလည်း တခြားဟာတွေ ပေးလိုက်ရတယ်... ရှင် သဘောပေါက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..."
"၅။ တခြား ဟိုနည်းနည်း ဒီနည်းနည်း ကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက် 'အာဘွား' အခါ ၄၀..."
"ရှင် ကျမကို စိတ်မပူပါနဲ့!... ကျမမှာ ပေးဖို့ 'အာဘွား' ၃၅ ခါ ကျန်နေသေးတယ်..."
"ဒီလက်ကျန် 'အာဘွား' လေးနဲ့ ဒီလကုန်ထိတော့ ရပ်တည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..."
"လာမယ့် လအတွက်လည်း ဒီလိုပဲ စီစဉ်လိုက်ရမှာလားဟင်???...
ထင်းခုတ်သမား တစ်ဦးဟာ သူဌေးဖြစ်သူရဲ့ အားပေး စကားကြောင့် နောက်ရက်ကစပြီး ထင်းတွေကို ကြိုးစားပမ်းစား ခုတ်တယ်.... ပထမနေ့မှာ ထင်းအရေအတွက် အတော်များများကို ခုတ်နိုင်ခဲ့တယ်...
ဒုတိယမြောက်နေ့မှာလည်း ပိုပြီးတော့တောင် ကြိုးစားပမ်းစား ခုတ်ခဲ့တယ်... ဒါပေမယ့် ပထမရက်လောက် ထင်းအရေအတွက်များများ မရခဲ့ဘူး...
ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ရက်ပေါင်းစွာ ဆထက်တံပိုး ကြိုးစားပြီး ထင်းတွေ ခုတ်လာခဲ့တယ်... ကြိုးစားသလောက်လည်း ရလာဒ်က ပိုပိုပြီး နည်းနည်းလာတယ်...
ဒီအခါ ထင်းခုတ်သမားက သံသယစိတ်ဝင်ပြီး... "ငါ့ခွန်အားတွေ ဆုံးရှုံးကုန်လို့ ဖြစ်ရမယ်..." ဆိုပြီး သူ့ကိုယ့်သူ ထင်မြင်ယူဆလိုက်တယ်...
နောက်တစ်နေ့ နံက်မှာ ထင်းခုတ်သမားဟာ သူဌေးဖြစ်သူထံသွားပြီး အဖြစ်အပျက်တွေ အားလုံးကို ပြောပြပြီး တောင်းပန်တယ်...
ဒီအခါ သူဌေးဖြစ်သူက... "မင်းရဲ့ ရဲတင်းကို မသွေးဖြစ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကွ...?" လို့ ဆိုပြီး ထင်းခုတ်သမားကို မေးလိုက်တယ်...
ဒီအခါ ထင်းခုတ်သမားက... "ရဲတင်းသွေးဖို့ ဟုတ်လား သူဌေး...? ကျွန်တော့မှာ နေ့စဉ် ထင်းတွေကို ကြိုးစားပမ်းစားခုတ်ရင်း အလုပ်များနေလို့ ရဲတင်းသွေးဖို့တောင် အချိန် မရှိပါဘူးခင်ဗျာ...." ဆိုပြီး ပြန်ဖြေလိုက်လေ သတည်း...။
'Our lives are like that... We sometimes get so busy that we don't take time to sharpen the axe...!!!
:'( :'( :'( :-( :-( :-( :'( :'( :'(
ရဲစခန်းမှူးနဲ့ သူ့တပည့် စက်နဲ့စကားပြောနေသည်....
(တပည့်)... "မြို့ထဲမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး သူ့ယောက်ျားကို ခုလေးတင် ပစ်သတ်လိုက်တယ် ဆရာ..."
(စခန်းမှူး)... "ဘာဖြစ်လို့ ပစ်သတ်တာလဲကွ...?"
(တပည့်)... "သူ ခုလေးတင် တိုက်ချွတ်ထားတဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို လမ်းတက်လျှောက်လို့တဲ့ ဆရာ..."
(စခန်းမှူး)... "ဒါဆို အဲဒီအမျိုးသမီးကို ဖမ်းပြီးပြီလား...?"
(တပည့်)... "ကြမ်းပြင် မခြောက်သေးလို့ မဖမ်းရသေးဘူး ဆရာ..."
:-D :-D :-D :-P :-P :-P :-D :-D :-P :-P :-P
(အဖေ).... "ငါ့သား မင်းမာမီနဲ့ဒက်ဒီ ဘယ်သူ့ကို ပိုချစ်သလဲကွ?..."
(အဖေ).... "ကောင်းပြီလေ.... ဒါဆိုရင် ဒက်ဒီက စင်ကာပူကို အလည်သွားမယ်... မင်းမာမီက ဂျပန်ကို အလည်သွားမယ်ဆိုပါစို့ မင်းဘယ်နိုင်ငံကို ရွေးမလဲ?..."
(အဖေ).... "ဒါဆို မင်းရဲ့မာမီကို ပိုပြီးချစ်တယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာလား?..."
(သား)... "မဟုတ်ပါဘူး ဒက်ဒီ... သားက ဂျပန်နိုင်ငံကို သဘောကျလို့ပါ..."
(အဖေ).... "ဟုတ်ပါပြီကွာ... ဒါဆိုရင် ဒက်ဒီက ဂျပန်ကို သွားမယ်... ပြီတော့ မင်းမာမီက စင်ကာပူကို သွားမယ် ဆိုရင်ရောကွာ... မင်း ဘယ်နိုင်ငံကိုရွေးမလဲ???...."
(အဖေ).... (ဒေါသထွက်တဲ့ လေသံနဲ့) "ဘာကွ!!! ဘာဖြစ်လို့???..."
(သား)... "ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့... သား အရင်တစ်ခေါက်က ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်ဖူး သွားလို့ပါ...ဒက်ဒီ..."
လူတစ်ယောက်က အဖိုးအိုကို မေးတယ်... "အဖိုးက အသက် (၉၀) တောင် ကျော်နေပြီ အဖိုးရဲ့ဇနီးကို ခုချိန်ထိ 'ဒါလင်' 'ဟန်နီ' 'အချစ်ကလေး' လို့ ခေါ်တုန်းပဲနော်... အဲဒီ လျှို့ဝှက်ချက်လေး ပြောပြပါလား အဖိုး?..."
ဒီအခါ အဖိုးအိုက... "ဒီလိုပါကွယ်... လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်ကစပြီး အဖိုး သူ့နာမည်ကို မေ့နေလို့ပါ... မေးလည်း မမေးရဲတော့လို့ပါကွယ်..."
:-D :-D :-D :-P :-P :-P :-D :-D :-D :-P :-P :-P